I-China Mobile Homogenizing Pump kunye noMvelisi we Hopper kunye noMthengisi | Qiangzhong
Sigxile ekuveliseni ukutya kunye nezixhobo zonyango, kwaye siyazi ngcono!
Le mveliso isetyenziswa ngokubanzi kukutya, isiselo, amayeza, i-bioengineering, unyango lwamanzi, imichiza yemihla ngemihla, i-petroleum kunye nemizi-mveliso yamachiza.
* Olu lwazi lungentla lolokubhekisa kuphela kwaye lungenziwa ngokwezifiso ngokweemfuno zabathengi. 'Esi sixhobo singenziwa ngemfuneko ngokobunjani beemathiriyeli ekrwada ukuhlangabezana neemfuno zenkqubo, ezinjenge-viscosity enkulu, i-homogenization kunye nezinye iimfuno.
Impompo ye-emulsification (ekwabizwa ngokuba yi-in-line high-shear dispersion mixer) sisixhobo sokuxuba esisebenza kakuhle esidibanisa ukuxubana, ukusasazeka, ukutyumza, ukonyibilika, ukucoceka, ukuthambisa amandla, i-homogenization kunye ne-emulsification, izinto zayo ezisebenza ikakhulu zi-stator kunye ne-rotator, I-Rotor ijikeleza ngokukhawuleza ukuvelisa amandla e-centrifugal kunye namandla e-hydraulic kwaye i-stator ihlala ihleli. Ngokudityaniswa ngqo kwe-rotor kunye ne-stator, amandla oqinileyo okucheba aveliswa ngexesha lokujikeleza ngesantya esiphezulu, kwaye loo nto ifakwa kukucheba okuqinileyo, ukuphuma kwe-centrifugal, ukuqhekeka kwefuthe, ukungqubana kolwelo, kunye nengxwabangxwaba efanayo. Ke ngoko, amajelo eendaba ahlukeneyo anje ngesigaba esiqinileyo esingafakwanga, isigaba samanzi, kunye nesigaba segesi asasazeka ngokufanayo kwaye acocekile kwaye axhonywa ngephanyazo. Emva komjikelo wokubuyisa, imveliso ezinzileyo kunye esemgangathweni ekugqibeleni ifunyenwe.
Impompo ye-emulsification / kwi-line-shear high-shear mixer mixer inokusebenza ngokufanelekileyo, ngokukhawuleza, kwaye ngokulinganayo isasaze isigaba esinye okanye ezingaphezulu kwesinye isigaba esiqhubekayo, ngelixa kwimeko yesiqhelo izigaba zingenakunyibilika. Ngu shear ephezulu yomgama velocity eveliswe ngesantya esiphakamileyo ujikeleziso lwamandla kunye namandla aphezulu e-kinetic aziswe ngesantya esiphezulu sokusebenza komatshini, izinto ezikwisikhewu esincinci seRotor kunye ne-stator inyanzeliswa kukucheba komatshini kunye ne-hydraulic, i-centrifugal extrusion, ulwelo lolwelo ukungqubana, iimpembelelo zinyembezi kunye nesiphithiphithi kunye nezinye iziphumo ezibanzi. Oko kwenza isigaba esiqinileyo esingahambelaniyo, isigaba esingamanzi kunye nesigaba segesi esikhawulezileyo sisasazeke, sasasazeka kwaye saxhonywa phantsi kwenyathelo elidityanisiweyo lobuchwephesha obuhambelanayo kunye nesixa esifanelekileyo sezongezo. Okokugqibela iimveliso ezizinzileyo nezikumgangatho ophezulu ziyafumaneka emva kwemijikelezo ephindaphindwayo yokuhamba rhoqo.
Amaqela amathathu e-stator kunye ne-rotor afakwe kwigumbi lokusebenza lempompo ye-emulsification. Ishafu shaft egumbini lokusebenza cantilevered. Ukudibanisa i-elastic kudibanisa i-motor kunye ne-spindle kwizindlu ezithwala ukuphucula umgangatho wokusebenza we-shaft. Iifom zokutywina zikhethwa ngokusekwe kwiimeko ezahlukeneyo zomsebenzi. Ilungele iibhetshi eziphakathi nezikhulu zemveliso eqhubekayo emgceni okanye imveliso yokurisayikilisha.
Egqithileyo Umxhubi woTywala wePowder
Okulandelayo: Umatshini wokusasaza ohleliweyo
Impompo ye-emulsification yempompo nge-hopper
Impompo yokuxuba ehambelana neselfowuni ephezulu